Sys-Con: Ebe nrụọrụ weebụ kachasị iwe, mgbe? | Martech Zone
Sys-Con: Ebe nrụọrụ weebụ na-akpasu iwe.
Obere oge gara aga, enwetara m Alert Google na edemede banyere ihe kpatara Ajax ji gabiga Java. Dị ka nnukwu edemede, ọ bụghị ya? Enweghị m ike ịgwa gị n'ihi na anaghị m agụ ya. Nke a bụ ihe m zutere mgbe m rutere ebe ahụ:
Ihe na-eme ka ibe a na-akparị mkparị:
Mgbe ibe ahụ na-ebupụta, mmapụta mgbapụta dakwasịrị m n'etiti anya na obere njikọ dị na isi. Mmapụta adịghị mmapụta windo ka ogwepụta mmapụta anaghị arụ ọrụ. Ọzọkwa, a na-etinye mgbasa ozi ahụ nke ọma iji gosipụta ADS ndị ọzọ n'ime sidebar na ọ na-egbochi ọdịnaya m bịara ịhụ.
Ọ bụrụ na ịgbadaa ala, mgbasa ozi ahụ ga-anọ otu ọnọdụ! Nweghị ike ịgụ ọdịnaya ahụ na-enweghị ịpị nso na Mgbasa Ozi.
Ihe ngosi vidio a na-amalite igwu egwu ozugbo a malitere saịtị ahụ na ụda! Achọghị m ịma ụda na ibe weebụ… mgbe m jụrụ ya.
N'ime peeji enwere mgbasa ozi 7 n'echiche plain na enweghị ọdịnaya.
O nweghi uzo uzo ise di na peeji a! E nwere ihe a listbox, kwụ tabbed menu, kehoraizin menu, a kwance ticker menu, sidebar menus… olee otú onye ọ bụla nwere ike ịhụ ihe ọ bụla na nke a website? Ana m eche ma ọ bụ n’ebe ahụ n’ezie bụ nke ọ bụla ọdịnaya na saịtị ahụ n'etiti menu niile na mgbasa ozi!
Nke a bụ, e chere, webụsaịtị ahụ bụ akụ maka ndị ọkachamara na Weebụsaịtị! Nwere ike ikwere nke ahụ?
Ihe omuma ihe omuma na ebe omuma
N'iji ya tụnyere, ka anyị lelee CNET. CNET nwekwara ọtụtụ ihe akụrụngwa (nke ị pịa na-egwu if ị ga-achọ, na mgbasa ozi 7 n'ezoghị anya! Agbanyeghị, igodo nsoro na nhazi ibe weebụ na-akwalite ọdịnaya ahụ kama izochi ya.
Mmetụta na Ntụkọ
Ọ bụrụ na ị na-echeghị imewe bụ akụkụ dị mkpa nke akụkọ ozi na ozi weebụsaịtị, m ga-atụba na nke a Ntụle ọnụ ọgụgụ Alexa:
Kedu ebe nrụọrụ weebụ kachasị iwe gị? Biko… debe ya na saịtị ahia na / ma ọ bụ teknụzụ.
Kedu ihe kpatara na e nwere ọtụtụ Email na igbe mbata gị ka ị ghara ịgụ.
WordPress: MySQL Search na Dochie iji PHPMyAdmin
Mee 13, 2007 na 5: 10 PM
Daalụ daalụ daalụ daalụ!
N'ikpeazụ! Ee, sys-con bụ na Ebe nrụọrụ weebụ kachasị iwe m enwetụla. You hụrụ ụkwụ ukwu *** na nke ahụ? Saịtị ahụ adịghị arụ ọrụ ọfụma na Firefox.
Mee 14, 2007 na 1: 00 AM
Sys-con bụ otu n'ime weebụsaịtị ndị m kpọrọ asị ka m gaa.
Oge ụfọdụ ebe ọkọlọtọ agaghị arụ ọrụ nke ọma ma sie ike imechi na Firefox
Mee 14, 2007 na 6: 17 AM
Ọ dịtụ mma mgbe ị na-eji Firefox na ngwakọta nke Adblock (ya na Filterset.G) na Flashblock. Naanị iwe na-ewe iwe na-egosi (mgbasa ozi ndị ọzọ niile agaala).